आत्महत्या समाधान हो र ? अछामका पत्रकारले मनै रुवाउने स्ट्याटस लेखेर यसरी गरे आत्महत्या !
ARCHIVE, MEDIA » आत्महत्या समाधान हो र ? अछामका पत्रकारले मनै रुवाउने स्ट्याटस लेखेर यसरी गरे आत्महत्या !
अछाम- अछामका एक पत्रकारले आत्महत्या गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मार्मिक स्टाटस लेख्दै स्थानीय रेडियो सोसाइटीमा कार्यरत पत्रकार खकेन्द्र परियारले बिहिबार झुण्डिएर आत्महत्या गरेका हुन् । परियारले बुधबार आफ्नो फेसबुकमा निक्कै मार्मिक स्टाटस (सुसाइड नोट) लेखेका थिए ।
स्टाटसमा उनले जिन्दगीमा आफु पनि खुसी नभएको र घरपरिवारलाई समेत कुनै खुसी दिन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन,-‘जिन्दगीमा नत अाफु खुसि भए नत अामा,बुबा भाइ बहिनिको लागि गर्न सक्य उनी हरुका पनि म बाट केही अाशा र इक्षा हुदाहुन मैले केही गर्न सकिन जिन्दगीमा धेरै अफ्ट्यारा माेडहरु अाय म संग ती मोड हरुलाइ सहज बनाउने कुनै उपय थियन त्यसैले मैले यो जिन्दगी अगाडि बढाउनु भन्दा यतिकैमा रोक्न बेस लाग्यो ।’